Mino ny avo isan-jaton'ny mpampiasa tsy teknika manosika azy ireo hilaza ny fahasosorany rehefa misy ny fanovana toa izao. Zatra zavatra iray izy ireo ary tsy te hiova. Tsy azoko antoka fa hisy izany. Araka ny voalazan'ny ohabolana taloha hoe: Ovao na ho faty… lesona nianaran'ny MySpace.
Koa satria nanova tsy tapaka ny fomba fifandraisan'ny olona amin'ny sehatra i Facebook, heveriko fa mamelombelona ny mpihaino azy ireo tsikelikely izy ireo rehefa misy ny fanavaozana. Ohatra tsara aho… Somary kivy aho taloha, nefa tsy miraharaha izany aho izao. Mandany 10 minitra fanampiny fotsiny aho mitady ilay safidy satria novain'izy ireo ny toerany.